China AUMAN EST-A mveliso kunye nabenzi | Ifoto
FOTON AUMAN EST Flagship Truck for transport-haul ixesha elide
Indlela yokuqhuba 4 * 2/6 * 4/6 * 2R
Ibhokisi yemiyalezo Ibhanti ekhawulezayo / ZF
Uhlobo lweCab 2490
Isantya esiphezulu 106/110 km / h
Ukunqunyanyiswa Ukuhlola umoya
Asi engaphambili 6.5T
Itrektara enomthwalo onzima kwimarike yempahla ephezulu, idityaniswa ngokudibeneyo yiFoton, iBFDA kunye neCummins esekwe kwimizamo yeminyaka emi-4 eYurophu kunye novavanyo lweendlela ezili-10 lezigidi.
Injini yeFoton Cummins
Ukufuduswa kwe-11L kunye ne-12L
Ukuya kuthi ga kwi-490hp imveliso yamandla kunye ne-2,300Nm yokukhutshwa kwamandla amakhulu
Ngokukhawuleza ukuqala, ukuhamba kunye nokufumana
Ukuhlangabezana neemfuno kwiimeko zokusebenza ezahlukeneyo
Ukukhokela izixhobo ezikhuselekileyo zokukhusela
iBrake2.9 Injini yaqhekeza
Idiski ye-brake ineempawu ezizinzileyo zokuzinza kwe-thermal, ukusebenza kakuhle kwe-wading kunye nemitha ekhawulezayo. Injini yamandla aphakamileyo yokucinezela itekhnoloji: ukuya kuthi ga kwi-370pas ubuninzi bamandla e-braking.
Dibana noMmiselo oQhelekileyo weCollison
Ulwakhiwo kunye nezixhobo zomzimba wonke omtsha wamandla aphakamileyo zenziwe ngcono kukulinganisa kweCAE kuthetha ukuhlangabezana nommiselo ongqongqo kakhulu we-ECER-29-03 kunye nokufezekisa ukhuseleko oluphezulu lokuqhuba.
Injini ene-high-displacement kunye ne-torque ephezulu ngesantya esisezantsi, ukuhanjiswa kwe-AMT, kunye nesantya esisezantsi i-asi engasemva zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo ukuphucula ukusebenza kwe-2%.
Yonke iqonga elitsha elakhiwe ngobuchwephesha obukhokelayo baseYurophu kunye nokuphuhlisa iilori zomthwalo onzima kunye nokusingqongileyo-ngemizamo yokudibana neDaimler kunye neBenz ngokungqinelana nomgangatho weR & D waseJamani; iimodyuli zokwakha eziphambili zabelwana ngazo zonke iilori ezinobunzima obusekwe kwiBenz SFTP ukuqinisekisa umgangatho welori. I-chassis eneqonga elitsha-lonke kunye nolwakhiwo olulungiselelwe ngokubanzi isebenzisa izinto ezintsha kunye neetekhnoloji ukunciphisa ubunzima obufileyo kunye nokugcina
I-chassis eneqonga elitsha kunye nolwakhiwo olulungiselelwe ngokubanzi isebenzisa izinto ezintsha kunye neetekhnoloji ukunciphisa ubunzima obufileyo kunye nokugcina amafutha ngakumbi ngokusekwe kukhuseleko lwaseYurophu.